Wafdi ka socda Dowladda oo ku wajahan Gaalkacyo lana kulmaya Xaaf | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Wafdi ka socda Dowladda oo ku wajahan Gaalkacyo lana kulmaya Xaaf
Wafdi ka socda Dowladda oo ku wajahan Gaalkacyo lana kulmaya Xaaf
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay gaaraan wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha guddiga dib u eegista Dastuurka laba aqal Sanoter Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid.
Wafdiga ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka noqon doona odayaal iyo siyaasiin ka soo jeeda deegaanda Galmudug,waxaana Magaalada Gaalkacyo laga dareemayaa qaban qaabada soo dhaweynta Wafdiga.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in ujeedka wafdiga ay u tagayaan Magaalada Gaalkacyo ay tahay sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo kasoo horjeeda doorashadii ka dhacdey Magaalada Dhuusamareeb.
Kulanka Xaaf iyo wafdiga ka socda dowladda ayaa waxaa looga wada hadlayaa sidii xaaf looga qancin lahaa tabashada uu qabo,isla markaana uu uga qeyb-geli lahaa Xaflada Caleema-saarka Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor).
Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxaa Magaalada Gaalkacyo uu ku heystaa Xildhibaano uu sameystay iyo qaar kamid ah golihii Wasiirada Galmudug,waxaana dadaal loogu jiraa sidii loo qanacin lahaa.
Jeneraal Qasem Suleimani oo maanta lagu aasayo dalka Iran
Taliska ciidanka Booliska Somalia oo faahfaahyey qasaarihii ka dhashay weerarkii...
Kulan looga hadlayay xiisada Wabiga Niil oo kusoo gabagaboobay Mareykanka